အလင်းရောင်ကြယ်များ: August 2014
လူအများ စိတ်ဝင်စားနေကြတဲ့ ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်းကြီးကို ရှာတွေ့ပြီလို့ ခေါင်းလောင်းရှာဖွေရေး အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ဦးစံလင်းက ဒီကနေ့ ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ပါတယ်။
ခေါင်းလောင်းကြီးကို သူတို့ တွေ့ရှိထားပြီဖြစ်ပေမယ့် သတင်းထုတ်ပြန်ရတာ နောက်ကျရတာကတော့ နဂါးတွေက ခေါင်းလောင်းကြီးကို ပူဇော်နေလို့ ဖြစ်တယ်လို့ အွန်လိုင်းမှာ ပျံ့နေတဲ့ ဦးစံလင်းရဲ့ ကြေညာ ချက်မှာ တွေ့ရပါတယ်။
ဒီဗွီဘီသတင်းတပုဒ်မှာတော့ ဦးစံလင်းက ခေါင်းလောင်းကြီးကိုတွေ့တာ အတည်ပြု ပြောထားပေမယ့် ဓမ္မစေတီခေါင်း လောင်း ဟုတ်၊ မဟုတ် ကိုတော့ ကုန်းပေါ်ရောက်မှ သိရမယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။
ဦးစံလင်းရဲ့ ကြေညာချက်အပြည့်အစုံကိုလည်း ဧရာဝတီပရိသတ်များ ဖတ်နိုင်အောင် တင်ပေးလိုက် ပါတယ်။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 8/26/2014 05:12:00 pm No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
မြန်မာနိုင်ငံတွင် အချိန်တိုတိုအတွင်း ကြီးပွားချမ်းသာသူများ၏ နောက်ကွယ်တွင်
မည်သည့် လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်နေသည်ကို စုံစမ်းဖော်ထုတ် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ငွေကြေးဆိုင်ရာ စုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးတပ်ဖွဲ့(FIU) မှ ဒုတိယတပ်ဖွဲ့မှူးရဲမှူးကြီး ကျော်ဝင်းသိန်းက ဩဂုတ် ၂၂ ရက်တွင် ရန်ကုန်မြို့ ကုန်သည်စက်မှုအသင်းချုပ်၌ ပြုလုပ်သော ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေး ဆွေးနွေးပွဲတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 8/26/2014 04:35:00 pm No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
မန္တလေးမြို့တွင် ချို့တဲ့ကလေးများအတွက် ရည်ရွယ်သော ပလက်ဖောင်း စာသင်ဝိုင်း
မန္တလေးမြို့တွင် ချို့တဲ့သူ ကလေးများအတွက် ရည်ရွယ်သော ပလက်ဖောင်း စာသင်ဝိုင်းအပေါ် စိတ်ဝင်စား လှူဒါန်းမှုများ ရှိလာကြောင်း သိရသည်။
၇၇ လမ်း၊ လမ်း ၃၀ နှင့် ၃၁ လမ်းကြား မီးရထား တိုက်ခန်းဆိုင်များရှေ့တွင် ညစဉ် ၇ နာရီမှ ၉ နာရီအထိ စေတနာ့ ၀န်ထမ်းများက ချို့တဲ့ကလေးများကို ပညာသင်ကြား ပေးလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။ "ပလက်ဖောင်းပျိုးခင်း" ဟု အမည်ပေးထားသည့် အဆိုပါ အခမဲ့ ပညာဒါနတွင် သူငယ်တန်းမှ
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 8/26/2014 04:23:00 pm No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
ဂျပန်နိုင်ငံ ဟီရိုရှီးမား မြို့စွန်မှာ မြေပြိုမှုကြောင့် ပိတ်မိနေသူ ၅၁ ဦးကို ကြိုးစား ရှာဖွေနေကြဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အိမ်တွေ အများအပြား ပျက်စီးခဲ့ရတဲ့အပြင် ခုချိန်ထိ သေဆုံးသူ ၃၉ ဦး ရှိသွားပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်လလောက် ရွာရမယ့် မိုးကို တရက်တည်းနဲ့ ရွာခဲ့လို့ လူနေအိမ်တွေပေါ်ကို တောင်ကမ်းပါးယံတွေ ပြိုကျခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ခုချိန်ထိ မိုးကြီးနေဆဲ ဖြစ်လို့ နောက်ထပ် မြေပြိုမှုတွေ ရှိလာနိုင်တဲ့အတွက် ကယ်ဆယ်ရေးတွေ ထင်သလောက် ခရီးမပေါက် ဖြစ်နေရပါတယ်။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 8/23/2014 09:15:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
ပြီးခဲ့တဲ့လက သူပုန်တွေ ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ ယူကရိန်းနိုင်ငံ အရှေ့ခြမ်းဒေသအပေါ် ဖြတ်သန်း မောင်နှင်စဉ် ပစ်ချခံရတဲ့ မလေးရှားလေယာဉ် MH17 နဲ့ လိုက်ပါသွားတဲ့ ခရီးသည်တွေထဲက မလေးရှား နိုင်ငံသား ၂၀ ရဲ့ ရုပ်ကလပ်တွေကို ပထမအသုတ် အဖြစ် ဒီကနေ့ မလေးရှားနိုင်ငံဆီ ပြန်လည် သယ်ဆောင်လာပါတယ်။
လက်ထောက်လေယဉ်မှူး အာမတ် ဟာကီမီရဲ့ ဆွေမျိုးတဦး ပူဆွေး ငိုကြွေးနေပုံနဲ့တကွ ဒီကနေ့ ပူတရာဂျာရာမှာ ကျင်းပတဲ့ ဈာပန အခမ်းအနားက ဓာတ်ပုံတချို့ ဖြစ်ပါတယ်။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 8/23/2014 08:54:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
ရန်ကုန်တိုင်း မြို့ ပါတ်မီးရထားပို့ ဆောင်ရေးမှခရီးသွား ပြည်သူ့ ထံသဘောထားအကြံပြုတောင်းခံလက်ကမ်းစာစောင်
နိုင်ငံတော်မီးရထားဝန်ကြီးဌာန ရန်ကုန်မြို့ ပါတ်ရထားစီးနင်းရာမီးရထားတာဝန်ကျဝန်ထမ်းများမှ
မီးရထားစီးနင်းလိုက်ပါသောခရီးသည်များ၏ ရင်ထဲကဆန္ဒလွတ်လပ်စွာဝေဖန် ရေးသား သဘောထား
ရယူသောလက်ကမ်းစာစောင်အား မီးရထားတာဝန်ကျ လက်မှတ်စစ် ခွင့် ပြုချက်ဖြင့် ပြည်သူလူထု
စိတ်ဖြင့်တစ်ထပ်တည်းထားသော ကျွန်တော်အလင်းရောင်ကြယ်များ၏ ဘလောက်တွင်
ဖတ်ရှု့ မိသူတိုင်း မိမိဆန္ဒ၏ သဘောကွန့် မက်ရေးနိုင်ပြီး...ကွန့် မက်ရေးသူများ ပြသနာတစ်စုံဖွယ်ရာ
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 8/23/2014 08:50:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
Post by Nay Min.
ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်းပေါ်ရှိ သင်္ဘောပျက်ကို ဖယ်ရှားနေကြောင်း ဆယ်ယူရေးအဖွဲ့ပြော ( ရုပ်သံ ) ရေအောက်တွင်နစ်မြုပ်နေသော ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်း ဆယ်ယူနေသည်မှာ ငါးရက်ရှိပြီဖြစ်သော်လည်း ခေါင်းလောင်းပေါ်တွင် ဖုံးအုပ်နေသော သင်္ဘောပျက်တစ်စီးကို ဖယ်ရှားနေသည့်အဆင့်သာ ရှိသေးကြောင်း ခေါင်းလောင်းဆယ်ယူရေးအဖွဲ့ထံမှ သတင်းရရှိသည်။ ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်းကြီး အပေါ်တွင် သင်္ဘောပျက်တစ်စီး က ဖုံးအုပ်လျက်ရှိနေသော ကြောင့် ယင်းသင်္ဘောကို ဖယ်ရှား နေသည့်အချိန်ဖြစ်နေပြီး ရေ အောက်တွင် ခေါင်းလောင်းအမှန် တကယ်တွေ့ရှိပြီလားဆိုသည့် မေးခွန်း နှင့်ပတ်သက်၍ ဆယ်ယူရေးအဖွဲ့က နောက်မှသတင်းထုတ်ပြန်မည်ဖြစ်၍ ပြောကြားခဲ့ခြင်းမရှိချေ။ ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်းကြီး ဆယ်ယူရေးလုပ်ငန်းကို ပဲခူးမြစ်၊ ပုဇွန်တောင်ချောင်းနှင့် ရန်ကုန် မြစ်ဆုံစည်းရာ မြစ်ဝတွင် အမှတ်အသားပြုစည်းဝိုင်းတားကာ ရေငုပ်သမားများနှင့်အလှည့်ကျ လုပ်ဆောင်နေခြင်းဖြစ်သည်။ ရန်ကုန်မြစ်ဝတွင် သုံးထပ်သင်္ဘောတစ်စီးက ကျောက်ချရပ်နားထားပြီးယင်းအနီးတွင် စက်လှေငယ်တစ်စီးက ထပ်မံရပ်နားထားကာ ပရိတ်ရွတ်ခြင်း၊ စောင့်ကြည့်ခြင်းများကို အဆက်မပြတ်ပြုလုပ်လျက်ရှိသည်။ ‘‘အသေးစိတ်အချက် အလက်ကို ရေးမှတ်ထားပါတယ်။ အခုချိန်မှာတော့ ပြောပြလို့မရ သေးပါဘူး။ မကြာမီသတင်းထုတ် ပြန်သွားမှာပါ’’ဟု ခေါင်းလောင်း ဆယ်ယူရေးအဖွဲ့ ဦးဆောင်သူ ဦးစံလင်းက ပြောသည်။ ဆလုံရေငုပ်သမား ၁၀ ဦး၊ ဆယ်ယူရေးအဖွဲ့တွင် လူဦးရေ ၇၀ စုစုပေါင်း လူပေါင်း ၈၀ ဖြင့် ဆယ်ယူနေကြပြီး တစ်ရက်လျှင် ရေထချိန်မနက်၊ ညနေတစ်ကြိမ် စီငုပ်ပြီး ရေစီးကြမ်းသည့်နေ့တွင် တစ်နေ့တစ်ကြိမ်သာ ငုပ်နိုင်ခဲ့ သည်ဟု သတင်းရရှိသည်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုး ရအဖွဲ့က ခွင့်ပြုချက်ပေးသည်နှင့် ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်းဆယ်ယူ ရေးလုပ်ငန်းကို ဩဂုတ် ၉ ရက် က စတင်ခဲ့ပြီး သုံးရက်ရှိပြီဖြစ် ကြောင်း ဦးစံလင်းက ပြောသည်။ သင်္ဘောနှစ်စီးဖြင့် ဆယ်ယူ မည်ဖြစ်ပြီး တစ်ရက်ဆယ်ယူ စရိတ်သည် ကျပ်သိန်း ၂၀၀ နီးပါးရှိသည်ဟုဆိုသည်။ ‘‘ခေါင်းလောင်းရဲ့အပေါ်မှာ ဂျပန်ခေတ်တုန်းက နစ်မြုပ်ခဲ့တဲ့ သံထည်နဲ့လုပ်ထားတဲ့ သင်္ဘော တစ်စီးရှိတယ်။ အဲဒီအောက်မှာမှ ခေါင်းလောင်းရှိတယ်။ အဲဒီ သင်္ဘောကို ဖယ်နိုင်မှသာ ခေါင်း လောင်းကိုဆယ်လို့ရမယ်။ ခေါင်း လောင်းကြီးရဲ့အပေါ်မှာ ပုစွန် တုပ်ကွေးအကွင်းမရှိတော့ဘူး။ ခေါင်းလောင်းက အောက်ကို ၄၅ ဒီဂရီစောင်းပြီး အဝကအပေါ်မှာ ရှိနေတယ်။ ရေစီးကြမ်းတဲ့အချိန် က ဆယ်လို့အကောင်းဆုံးအချိန် ဖြစ်လို့ အဲဒီအချိန်ရွေးလိုက်တာ ပါ’’ဟု ဦးစံလင်းက ရှင်းပြသည်။ ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်းရှာ ဖွေရေးနှင့် ဆယ်ယူရေးလုပ်ငန်း များကို အထက်ပါပုဂ္ဂိုလ်က ၁၉၉၇ ခုနှစ်ကတည်းကပြုလုပ်ခဲ့ ပြီး ၁၉၉၈ ခုနှစ်တွင် ခေါင်း လောင်းတည်ရှိရာနေရာကို တွေ့ရှိခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး ၁၉၈၉ ခုနှစ်ခန့်တွင် စာနယ်ဇင်းမီဒီယာများက စတင်ဖော်ပြခဲ့ပြီးနောက် ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဆယ်ယူရန်အကြိမ်ကြိမ်ကြိုးပမ်းခဲ့သည် ယခုသမ္မတ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်တွင်လည်းဆယ်ယူရန် ခွင့်ပြုချက်ရရှိရေးအတွက် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပစိတ်ဝင်စားသူများက ထပ်မံကြိုးပမ်းခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်သည်။ ပင်လယ်အောက်တွင် နစ်မြုပ်နေသော ရှေးဟောင်းပစ္စည်းများကို ရှာဖွေသည့်စင်ကာပူအခြေစိုက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုသည် ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် ယဉ်ကျေးမှု ဝန်ကြီးဌာနနှင့် ဆက်သွယ်ခဲ့ပြီး ဆယ်ယူရာတွင် ဂျီပီအက်စ်စနစ် ဖြင့် နည်းပညာကူညီမည်ဟုဆိုခဲ့ သော်လည်း အစီအစဉ်မဖြစ်ခဲ့ပေ။ 7day Nay Min ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်းပေါ်ရှိ သင်္ဘောပျက်ကို ဖယ်ရှားနေကြောင်း ဆယ်ယူရေးအဖွဲ့ပြော ( ရုပ်သံ ) ရေအောက်တွင်နစ်မြုပ်နေသော ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်း ဆယ်ယူနေသည်မှာ ငါးရက်ရှိပြီဖြစ်သော်လည်း ခေါင်းလောင်းပေါ်တွင် ဖုံးအုပ်နေသော သင်္ဘောပျက်တစ်စီးကို ဖယ်ရှားနေသည့်အဆင့်သာ ရှိသေးကြောင်း ခေါင်းလောင်းဆယ်ယူရေးအဖွဲ့ထံမှ သတင်းရရှိသည်။ ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်းကြီး အပေါ်တွင် သင်္ဘောပျက်တစ်စီး က ဖုံးအုပ်လျက်ရှိနေသော ကြောင့် ယင်းသင်္ဘောကို ဖယ်ရှား နေသည့်အချိန်ဖြစ်နေပြီး ရေ အောက်တွင် ခေါင်းလောင်းအမှန် တကယ်တွေ့ရှိပြီလားဆိုသည့် မေးခွန်း နှင့်ပတ်သက်၍ ဆယ်ယူရေးအဖွဲ့က နောက်မှသတင်းထုတ်ပြန်မည်ဖြစ်၍ ပြောကြားခဲ့ခြင်းမရှိချေ။ ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်းကြီး ဆယ်ယူရေးလုပ်ငန်းကို ပဲခူးမြစ်၊ ပုဇွန်တောင်ချောင်းနှင့် ရန်ကုန် မြစ်ဆုံစည်းရာ မြစ်ဝတွင် အမှတ်အသားပြုစည်းဝိုင်းတားကာ ရေငုပ်သမားများနှင့်အလှည့်ကျ လုပ်ဆောင်နေခြင်းဖြစ်သည်။ ရန်ကုန်မြစ်ဝတွင် သုံးထပ်သင်္ဘောတစ်စီးက ကျောက်ချရပ်နားထားပြီးယင်းအနီးတွင် စက်လှေငယ်တစ်စီးက ထပ်မံရပ်နားထားကာ ပရိတ်ရွတ်ခြင်း၊ စောင့်ကြည့်ခြင်းများကို အဆက်မပြတ်ပြုလုပ်လျက်ရှိသည်။ ‘‘အသေးစိတ်အချက် အလက်ကို ရေးမှတ်ထားပါတယ်။ အခုချိန်မှာတော့ ပြောပြလို့မရ သေးပါဘူး။ မကြာမီသတင်းထုတ် ပြန်သွားမှာပါ’’ဟု ခေါင်းလောင်း ဆယ်ယူရေးအဖွဲ့ ဦးဆောင်သူ ဦးစံလင်းက ပြောသည်။ ဆလုံရေငုပ်သမား ၁၀ ဦး၊ ဆယ်ယူရေးအဖွဲ့တွင် လူဦးရေ ၇၀ စုစုပေါင်း လူပေါင်း ၈၀ ဖြင့် ဆယ်ယူနေကြပြီး တစ်ရက်လျှင် ရေထချိန်မနက်၊ ညနေတစ်ကြိမ် စီငုပ်ပြီး ရေစီးကြမ်းသည့်နေ့တွင် တစ်နေ့တစ်ကြိမ်သာ ငုပ်နိုင်ခဲ့ သည်ဟု သတင်းရရှိသည်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုး ရအဖွဲ့က ခွင့်ပြုချက်ပေးသည်နှင့် ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်းဆယ်ယူ ရေးလုပ်ငန်းကို ဩဂုတ် ၉ ရက် က စတင်ခဲ့ပြီး သုံးရက်ရှိပြီဖြစ် ကြောင်း ဦးစံလင်းက ပြောသည်။ သင်္ဘောနှစ်စီးဖြင့် ဆယ်ယူ မည်ဖြစ်ပြီး တစ်ရက်ဆယ်ယူ စရိတ်သည် ကျပ်သိန်း ၂၀၀ နီးပါးရှိသည်ဟုဆိုသည်။ ‘‘ခေါင်းလောင်းရဲ့အပေါ်မှာ ဂျပန်ခေတ်တုန်းက နစ်မြုပ်ခဲ့တဲ့ သံထည်နဲ့လုပ်ထားတဲ့ သင်္ဘော တစ်စီးရှိတယ်။ အဲဒီအောက်မှာမှ ခေါင်းလောင်းရှိတယ်။ အဲဒီ သင်္ဘောကို ဖယ်နိုင်မှသာ ခေါင်း လောင်းကိုဆယ်လို့ရမယ်။ ခေါင်း လောင်းကြီးရဲ့အပေါ်မှာ ပုစွန် တုပ်ကွေးအကွင်းမရှိတော့ဘူး။ ခေါင်းလောင်းက အောက်ကို ၄၅ ဒီဂရီစောင်းပြီး အဝကအပေါ်မှာ ရှိနေတယ်။ ရေစီးကြမ်းတဲ့အချိန် က ဆယ်လို့အကောင်းဆုံးအချိန် ဖြစ်လို့ အဲဒီအချိန်ရွေးလိုက်တာ ပါ’’ဟု ဦးစံလင်းက ရှင်းပြသည်။ ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်းရှာ ဖွေရေးနှင့် ဆယ်ယူရေးလုပ်ငန်း များကို အထက်ပါပုဂ္ဂိုလ်က ၁၉၉၇ ခုနှစ်ကတည်းကပြုလုပ်ခဲ့ ပြီး ၁၉၉၈ ခုနှစ်တွင် ခေါင်း လောင်းတည်ရှိရာနေရာကို တွေ့ရှိခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး ၁၉၈၉ ခုနှစ်ခန့်တွင် စာနယ်ဇင်းမီဒီယာများက စတင်ဖော်ပြခဲ့ပြီးနောက် ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဆယ်ယူရန်အကြိမ်ကြိမ်ကြိုးပမ်းခဲ့သည် ယခုသမ္မတ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်တွင်လည်းဆယ်ယူရန် ခွင့်ပြုချက်ရရှိရေးအတွက် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပစိတ်ဝင်စားသူများက ထပ်မံကြိုးပမ်းခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်သည်။ ပင်လယ်အောက်တွင် နစ်မြုပ်နေသော ရှေးဟောင်းပစ္စည်းများကို ရှာဖွေသည့်စင်ကာပူအခြေစိုက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုသည် ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် ယဉ်ကျေးမှု ဝန်ကြီးဌာနနှင့် ဆက်သွယ်ခဲ့ပြီး ဆယ်ယူရာတွင် ဂျီပီအက်စ်စနစ် ဖြင့် နည်းပညာကူညီမည်ဟုဆိုခဲ့ သော်လည်း အစီအစဉ်မဖြစ်ခဲ့ပေ။ 7day
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 8/15/2014 10:00:00 pm No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
ဒိဘလောက်ကိုရေးတဲ့ လူကိုမြင်ဘူးနေခြင်ကြတဲ့ ဘလောက်ဂါသမားအလင်းရောင်ကြယ်များမှ မြန်မာပြည်ရှိဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်းကြီးဆယ်ယူနေကြောင်းကိုယ်တွေ့ လေ့လာဝေမျှခြင်း
အခုကျွန်တော်လူကြီးမင်း သွားတဲ့ အချိန်မှာ ရေတက်စပြုနေပြီး
အနီးကိုက် ၁၅၀ ခန့် လောက်ကနေကြည့် ရှု့ ရပါတယ် ထူးဆန်းတာကတော့ ..
စက်လှေနှစ်စင်းမှ ဆလုံတိုင်းရင်းသားများ ဘာမှရေငုတ်ဝတ်စုံမပါပဲ
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 8/13/2014 01:31:00 pm No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
အလှူအတန်းရက်ရောလို့ မြန်မာနိုင်ငံကပေးတဲ့ဘွဲ့မှန်သမျှအကုန်ယူပြီးသွားပြီဟု ဇေကမ္ဘာဦးခင်ရွှေဆို •••
From : .. SMMK
မြန်မာနိုင်ငံ စီးပွား လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး အချမ်းသာဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်များထဲတွင် တစ်ဦးအပါအ၀င် ဖြစ်သည့် ဇေကမ္ဘာဦးခင်ရွှေသည် အလှူအတန်းရက်ရောလှသည့်အတွက် လွန်ခဲ့သည့် ၁၅ နှစ်ခန့်မှ စတင်၍ မြန်မာနိုင်ငံ အစိုးရမှ ပေးအပ်သည့် ဘွဲ့မှန်သမျှ အားလုံးယူဆောင်ပြီးဖြစ်သည်ဟု ဇေကမ္ဘာဦးခင်ရွှေက မွန်ပြည်နယ်၊ ရေးမြို့နယ်သို့ လှူဒါန်းရေး ခရီးစဉ်အခမ်းအနား၌ ပြောဆိုခဲ့သည်။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 8/07/2014 04:00:00 pm No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
အပျက်တွေက မနေ့တစ်နေ့ကလိုပဲ ပြန်လည်
ရှိတယ် အဲဒီသားကို တောင်းပြုံးပွဲလာ
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 8/07/2014 03:58:00 pm No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 8/07/2014 03:54:00 pm 1 comment: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 8/03/2014 02:42:00 pm No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးကပြည်ပဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီများအတိုင်း ဖုန်းခေါ်ဆိုခလျှော့ချရန် စဉ်းစားနေဟုဆို
ကျော်စိုးဦး၊ စိုးမြင့်နိုင် - Flower News Journal အတွဲ(၁၀)၊ အမှတ်(၃၀)။
မြန်မာ့ဆက်သွယ် ရေးလုပ်ငန်း(MPT)က လက်ရှိဖုန်းပြော ဆိုခ တစ်မိနစ် ၂၅ ကျပ်နှုန်းသို့ လျှော့ ချနိုင်ရန် စဉ်းစားလျက်ရှိပြီး အမြန်ဆုံး သတင်း ထုတ်ပြန်ပေးသွားမည်ဟု မြန်မာ့ ဆက်သွယ်ရေးမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ဖလားဝါးနယူးစ်ဂျာနယ်သို့ ပြောသည်။
မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး အနေ နှင့် အခြားပြည်ပဆက်သွယ်ရေး ကုမ္ပဏီ များအတိုင်း လိုင်းတူချင်းဆက်ပါက
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 8/03/2014 02:33:00 pm No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
ဝန်ကြီးသစ် ဦးရဲထွဋ် Facebook မှာ ကတိသစ္စာပြု••••
ကျွန်တော်ကို ယနေ့ သြဂုတ်လ ၁ ရက်နေ့မှာ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအဖြစ် တာဝန် ပေးအပ်ခြင်းကို
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 8/03/2014 02:28:00 pm No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
ခွင့်ပြုချက်မဲ့ Ooredoo မိုးပျံပူဖောင်း ကြော်ငြာများကို မြို့တော်စည်ပင်မှ လိုက်လံဖြုတ်သိမ်း
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 8/03/2014 02:22:00 pm No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
ယနေ့ ခေတ်သည် စက်မှု့ ယန္တယား သိပ္ပံနည်းပညာ စာပေ တဟုန်းတည်း သူသူငါငါ အပြိုင်ဆိုင် တိုးတက်လာသာ ခေတ်ကြီးဖြစ်သည်ဆိုတာ လူတိုင်းအသိပါ....
ကျွန်ုပ်တို့ မြန်မာနိုင်ငံကြီးသည်လည်း အစဉ်ဆက်ဆက် မင်းတရား ခေါင်းဆောင်များ ချမှတ်သော ဥပဒေလမ်းစဉ်များမှီငြမ်း၍ တိုးတက်အောင်ချေလှမ်းများ ဆောင်ရွက်နေကြပေသည်...
အမှားရှိသလို အမှန်ရှိမည် ။အမှန်ရှိသလို အမှားဆိုးတာလည်းရှိတပ်ပေ၏။
ဒီဘလောက်စပေါ့ လေးရေးရခြင်းရည်ရွယ်ချက်မှာ ...မိမိကိုယ်ကျိုးအတွက် စီးပွားရေးစပွန်ဆာရှာစားခြင်း
တစ်ဦးနှင့် တစ်ယောက် အဖွဲ့ သည်းသော်၎င်း ပုဒ်ခတ်ဝေဖန်တာကို အားပေးအားမြှောက်ပြုပေးခြင်း၊
ရန်မလိုစကို ရန်လိုစအောင် လှေ်ာဘီ တိုက်ထုတ်ပေးခြင်း
ငါဟာ အင်တာနက်ကို ဘယ်၍မျှတပ်သည် ဘာတွေစွမ်းဆောင်နိုင်သည် ဟူသော မာန်ရှိန်ဂုဏ်တက်
ဘလောက်စပေါ့ သည်...ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ဒိုမိန်းတစ်ခုလောက် အနှစ်အရာသာမရှိပေမဲ့ 
မိမိတပ်စွမ်းသော နည်းပညာ ငွေကြေးအချိန်ကုန်ခံပြီး ....
မိမိဖတ်ရှု့ သိမြင်သလို ဟောဒီဘလောက်စပေါ့ အပေါ်ရောက်လာသော မိတ်ဆွေများလည်း
သိစေမြင်စေခြင်သောဆန္နဖြင့် ရပ်တည်ရေးသား ရှာဖွေကူးယူဝေမျှခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
လူတစ်ဦးတိုင်းတွင် စိတ်အနေထား ခံစားချက် ထပ်တူမရှိပါ...
ယနေ့ ကမ္ဘာကြီးမှာ ဘာတွေဖြစ်နေသလည်း၊ငါတို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဘာတွေဖြစ်နေသလည်း....
ဗဟုသုသော်၎င်း စဉ်းစားခြင်း ဆုံးဖြတ်ခြင်း လိုက်နာဝေဘန်ခြင်း အများအကျိုး ကိုယ်အကျိုး နိုင်ငံတော်အတွက်အကျိုးဆောင်ရွက်တပ်ခြင်း ။ကူညီတပ်စေခြင်း ထိမ်းသိမ်းကာကွယ်စောင့် ရှောက်တပ်စေခြင်း ...
တိုင်းပြည်နှင့်လူမျိုး အမျိုးဂုဏ် ဇာတိ သာသနာ မပျောက်စေရခြင်း..
မလိုအပ်ပဲ အမှု့ ခင်း မပွားများစေလိုခြင်း...အတွက်ရေးသားခြင်းဖြစ်ပါတယ်...
စာဖတ်သူများမှလည်း လိုအပ်သလို အကြံဥာဏ်များပေးခဲ့ ပါ...အမှားအမှန်ရှိခဲ့ ယင်လည်း ကူညီထောက်ပြပေးခဲ့ပါ..စာဖတ်သူဆန္နအတိုင်းဆောင်ရွက်ပါမည်..
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 8/03/2014 06:12:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 8/03/2014 03:16:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
ထိုင်ဝမ်က ကောင်းရှုံမြို့မှာ ဓာတ်ငွေ့ပေါက်ကွဲမှု
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 8/03/2014 02:56:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
ယမန်နေ့က ကျင်းပတဲ့ အော်ရီဒူး သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအပြီးမှာ သတင်းထောက်တွေကို အော်ရီဒူးက sony Experia E1 ဟမ်းဆက်တစ်လုံးစီကို ဆင်းကဒ်ထည့်ပေးပြီးသား နဲ့ အခြားလက်ဆောင်တွေ ပေးတယ်လို့ဆိုပါတယ် ။ အဲဒီလက်ဆောင်ဝေတဲ့အချိန် သတင်းထောက်တွေ ဝိုင်းလုကြလို့ ရုတ်ရုတ်သဲသဲဖြစ်သွားပါတယ် ။ အဲဒီလို ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက်နဲ့ ဖန်းလုယူမှုကြီးဖြစ်ပွါးခဲ့တာကို
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 8/03/2014 02:11:00 am 1 comment: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
လူအများ စိတ်ဝင်စားနေကြတဲ့ ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်းကြီးက...
အချိန်တိုတိုအတွင်း ကြီးပွားချမ်းသာသူများ၏ နောက်ကွယ...
ရန်ကုန်တိုင်း မြို့ ပါတ်မီးရထားပို့ ဆောင်ရေးမှခရီး...
ဒိဘလောက်ကိုရေးတဲ့ လူကိုမြင်ဘူးနေခြင်ကြတဲ့ ဘလောက်ဂါ...
ခွင့်ပြုချက်မဲ့ Ooredoo မိုးပျံပူဖောင်း ကြော်ငြာမျ...